ခေါင်းစဉ်: Family Pairing လုပ်ဆောင်ချက် အရင်းအမြစ်အသစ်များတွင် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များပါဝင် | TikTok သတင်းခန်း
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးSep 1, 2021
ခေါင်းစဉ်: Family Pairing လုပ်ဆောင်ချက် အရင်းအမြစ်အသစ်များတွင် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များပါဝင်
Author: Alexandra Evans, Head of Child Safety Public Policy
TikTok သည် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် မိဘအုပ်ထိန်းသူများနှင့် လက်တွဲကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ အုပ်ထိန်းစောင့်ရှောက်သူများအတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို အမီလိုက်၍ ပလက်ဖောင်းအသစ်များအကြောင်း သိရှိအောင် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် အွန်လိုင်းလုံခြုံမှုအကြောင်း ပြောကြားခြင်းသည် ၎င်းတို့အတွက် စိတ်ပင်ပန်းရလေ့ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုမိသည်။
ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများကလည်း ၎င်းတို့ အသံကို ကြားစေလို၍ နားထောင်စေလိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ အရာအားလုံး ရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်အတွက် ဆယ်ကျော်သက်တို့ လိုအပ်သည့်အရာများကို အကောင်းဆုံးအကြံပေးနိုင်သောသူမှာ ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ဘဝတွင် ယုံကြည်ရသော လူကြီးများထံမှ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုများကို အုပ်ထိန်းစောင့်ရှောက်သူများ သိရှိစေရန် အကြံပြုချက်များကို ထည့်သွင်းပေးစေခဲ့သည်။
ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ၊ Internet Matters မှ လူငယ်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ မိဘများအတွက် အဆင်ပြေစေမည့် အကြံပြုချက်များကို ထည့်သွင်းကာ Family Pairing လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ Account များကို Family Pairing အသုံးပြုကာ ချိတ်ဆက်ထားပြီးသော မိဘအုပ်ထိန်းသူတို့၏ Account များအနေဖြင့် အကြံပြုချက်များကို ထပ်မံလေ့လာရန် အသိပေးသော Notification ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြံပြုချက်များမှတစ်ဆင့် ဆယ်ကျော်သက်များ လိုချင်တောင့်တသော ပံ့ပိုးမှုအကြောင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းများကို လေ့လာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့မှစ၍ Family Pairing လုပ်ဆောင်ချက်ကို စတင်အသုံးပြုမည့် မိဘများ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းစောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့် ဤအကြံပြုလမ်းညွှန်ချက်များကို Sign up ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ Safety Center ၏ Guardian's Guide ကဏ္ဍတွင်လည်း လေ့လာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များမှ ၎င်းတို့၏ အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံများကို လမ်းညွှန်ပြသပေးရင်း အုပ်ထိန်းစောင့်ရှောက်သူများထံမှ လိုချင်တောင့်တသော အထောက်အပံ့များမှာ -
၁. “စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို နားလည်စေရန် ကူညီပေးပါ” - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များမှ ၎င်းတို့ယုံကြည်ရသော လူကြီးများကို ပလက်ဖောင်းတိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်နေစေရန် မမျှော်လင့်ကြဘဲ ၎င်းတို့၏ Account များကို Setup ပြုလုပ်ရန် ကူညီပေးခြင်းကို လိုလားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ settings များကို ဆန်းစစ်၍ သိရှိနားလည်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များမှ ၎င်းတို့မိဘများအနေဖြင့် စည်းသတ်မှတ်ရန် ဝန်လေးမှု မရှိစေလိုဘဲ ၎င်းတို့က ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကို ပိုမိုမျှော်လင့်ပြီး ကြိုဆိုကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
၂. “စကားပြောရန် အဆင်သင့်ရှိနေပေးပါ” - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များမှ ယုံကြည်ရသော လူကြီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာဘဝများကို စိတ်ဝင်စားစေလို၍ ၎င်းတို့အတွက် အွန်လိုင်းသည် မည်သို့အရေးပါပုံကို သတိထားမိစေလိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များနှင့် စကားပြောရန် အဆင်သင့်ရှိနေသင့်ပြီး စကားစပြောရန် ဝန်မလေးသင့်ပါ။
၃. “တစ်ခုခုပြုလုပ်၍ မှားယွင်းသွားပါက အထိတ်တလန့် မဖြစ်ပါနှင့်” - သင်၏ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးမှ လာရောက် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် အားငယ်ခြင်း၊ ကြောက်လန့်ခြင်း၊ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခြင်းတို့ ကြုံတွေ့ခံစားနေရနိုင်သည့်အတွက် ၎င်းတို့လာရောက်ကူညီပေးခြင်းကို ကျေနပ်အားရကြောင်း အသိပေးပြောကြားသင့်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများကို တန်ပြန်စွပ်စွဲချက်များ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ သိလိုရာကိုသာ မေးမြန်းပြီး အဖြေရှာခြင်းကို အာရုံစိုက်ပြုလုပ်သင့်သည်။
၄. “ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပါ” - ဆယ်ကျော်သက်များသည် ယုံကြည်မှုတစ်ခုရရှိရန် ကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်ဟု လက်ခံထားကြပြီး လူကြီးများ၏ ကြီးကြပ်ပေးမှုကို မျှော်လင့်ကြသော်လည်း အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ သင့်လျော်သော ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိသင့်သည်ဟု လက်ခံထားကြသည်။ မိသားစုတိုင်းသည် ကွဲပြားခြားနားကြပြီး ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးမှ နည်းပညာကို လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမှာလည်း ကွဲပြားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သင်၏ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးမှ ပလက်ဖောင်းများကို လုံခြုံစွာ အသုံးပြုနည်းကို သိရှိပါက သင်အမှားအယွင်းပြုလုပ်မိသောအခါ ၎င်းတို့မှ လာရောက်ကူညီပေးလိမ့်မည်ဖြစ်၍ ဤသည်မှာ ယုံကြည်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ပင်ဖြစ်သည်။
၅. “မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှုကို အလေးထားပေးပါ” - ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းလျက် Online နှင့် Offline နှစ်ခုလုံးတွင် ၎င်းတို့ လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေရန် ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းသိမ်းပြုလုပ်ပေးခြင်းသည် မိဘအုပ်ထိန်းမှုကဏ္ဍများထဲမှ ခက်ခဲ၍ အရှုပ်ထွေးဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးမှ သင့်ကို ပလက်ဖောင်းတွင် Follow မပြုလုပ်စေချင်ပါဟု ပြောကြားလာသောအခါတွင် ပိုမိုခက်ခဲနိုင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များအနေဖြင့် ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့်အရာများ ပြုလုပ်မည်ကို စိုးရိမ်ခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် စောင့်ကြည့်ခြင်း မခံရဘဲ သူငယ်ချင်းများနှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာပြောဆိုလိုခြင်းသာဖြစ်သည်။
Internet Matters ၏ CEO ဖြစ်သူ Carolyn Bunting (MBE) က "Internet Matters မှာ ကျွန်တော်တို့က အင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောကြားတဲ့အခါမှာ လူငယ်တွေရဲ့ ပါဝင်မှုက အွန်လိုင်းမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်"
"မိသားစုတွေအနေနဲ့ နည်းပညာကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖန်တီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ TikTok ရဲ့ ခြေလှမ်းက တကယ်ကို အားတက်စရာကောင်းပါတယ်"
"ဒီခြေလှမ်းအသစ်ကို ကြိုဆိုလုပ်ကိုင်ရင်း ကလေးနဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အွန်လိုင်းကို လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ် ဖန်တီးလုပ်ကိုင်ပေးခြင်းက အစသာဖြစ်ပြီးတော့ Industry တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီအတောအတွင်းမှာ မိဘများအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုကို တည်ဆောက်ရာမှာ ကလေးတွေနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာ ဘဝအကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပုံမှန်ပြောဆိုသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အခုလို ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေက စတင်လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်"
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးJun 14, 2022
ခေါင်းစဉ်: ကျွန်ုပ်တို့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျန်းမာရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
TikTok မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်မှု၊ ဖျော်ဖြေမှု၊ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ကြွယ်ဝမှုတို့ကို ယူဆောင်ပေးမည်ဟူ၍ ယုံကြည်ထားသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းများ၊ အပ်ပလီကေးရှင်းမျာ
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးApr 26, 2022
TikTok တွင် ချစ်ခင်ကြင်နာမှုနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းသစ်များ
စာရေးသူ: Cormac Keenan, Head of Trust & Safety, TikTok TikTok သည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ရပ်လုံးကို လေးစားမှု၊ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုနှင့် နားလည်မှု အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ထားသည်။ အသ
အသိုင်းအဝိုင်းMar 11, 2022
TikTok မှ အသက် ၁၃ နှစ်နှင့် အထက် အသုံးပြုသူများသာ အသုံးပြုနိုင်သည့် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ
စာရေးသူ: Tracy Elizabeth, Global Minor Safety Policy Lead, TikTok နေ့စဉ်နှင့်အမျှ နေရာပေါင်းစုံမှ ဖန်တီးသူများသည် TikTok ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ သ
TikTok ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် QR ကုဒ်ကို စကန်ဖတ်ပါ
TikTok မှာ ကြော်ငြာပါ